खोकी लाग्दा भुलेर पनि कहिल्यै नखानुहोस् यी ८ चिज, नत्र निम्त्याउँछ यस्ताे संक्रमण ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / खोकी लाग्दा भुलेर पनि कहिल्यै नखानुहोस् यी ८ चिज, नत्र निम्त्याउँछ यस्ताे संक्रमण !
खोकी लाग्दा भुलेर पनि कहिल्यै नखानुहोस् यी ८ चिज, नत्र निम्त्याउँछ यस्ताे संक्रमण !
admin February 8, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 103 Views
खोकी लाग्दा भुलेर पनि कहिल्यै नखानुहोस् यी ८ चिज, नत्र निम्त्याउँछ यस्ताे संक्रमण ! मनसूनमा ब्या`क्टेरि`यल इन्फे`क्स`नका कारण मानिसहरुमा खोकी र ज्वरोको समस्या देखिने गरेकाे छ ।
यो जाडाे मौसममा औषधी खाँदा ज्वरो त कम हुन्छ तर खोकी भने चाँडै निको हुँदैन । डाक्टरका अनुसार खानपिनका यस्तो केही कुराले खोकी र छातीको ख-का-रको समस्या थप बढ्न सक्छ जुन निम्न रहेका छन्:-
१) चिनी:- खोकी लाग्दा चिनी पनि खानुहुँदैन । यसले छा-तीमा इन्फ्ले`मे`शनको समस्यालाई बढाउने काम गर्छ । यति मात्रै होइन, चिनीले हाम्रो प्रतिरोधी क्षमतालाई कमजोर गरेर रुघा-खोकीको समस्या बढाउन सक्छ ।
२) दुध:- विशेषज्ञका अनुसार खोकी लाग्दा दुधबाट टाढै बस्नुपर्छ । दुध पिउँदा छातीमा क-फको समस्या थप बढ्ने गर्छ जसका कारण खोकीको समस्या बढ्नेछ । यस्तोमा तपाईंले कुनै पनि दुग्धजन्य पदार्थबाट टाढा नै बस्नुपर्छ ।
३) ता`रेका खानेकुरा:- मनसूनमा मानिसहरुलाई चियासँग पकौडा, फ्रेन्च फ्राइज खान मनपर्छ । तर ब्याक्टेरियल इन्फे`क्स`नका कारण खोकी लागिरहेको छ भने बिर्सेर पनि ता`रेका खानेकुरा नखानुहोस् । चिल्लो, भु`टे`का, ता`रेका खानाले तपाईंको घाँटीमा क्ष`ती पुर्याउँछ र खोकीको लक्षणलाई गम्भीर बनाउनेछ ।
४) भात:- डाक्टरका अनुसार भात चिसो प्रकृतिको हुन्छ र यसमा ख-कार बन्ने गुण पाइन्छ । यस्तोमा यसले रुघा-खोकीको समस्यालाई थप बढाउन सक्छ । यसै कारण रुघा-खोकी लाग्दा वा घाँटीको संक्रमण हुँदा डाक्टरले भात, दही, मसालेदार भोजन, केरा आदि नखान सल्लाह दिन्छन् ।
५) चिसा खानेकुरा:- यो मौसममा यदि तपाईंलाई खोकीले सताइरहेको छ भने चिसो खानेकुराबाट बच्नुहोस् । तपाईंले आइसक्रिम वा चिसो पानी वा जूस बिर्सेर पनि खानुहुँदैन । चिसा खानेकुराले तपाईंको खोकीलाई थप बढाउने गर्छ ।
६) मद्यपान:- चिनीजस्तै र`क्सी`जन्य पदार्थले पनि छातीमा इन्फ्ले`मे`शनको समस्या बढाउने काम गर्छ । यो हाम्रो सेतो रक्त कोसिकाका लागि पनि ख`तरनाक छ जसले शरीरको घा` उ भर्ने प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ ।
७) कफी:- यदि तपाईंलाई खोकी लागिरहेको छ भने क्या-फिन युक्त पेय पदार्थको सेवन गर्नबाट बच्नुहोस् । क्या-फिनले घाँटीको मां-सपेशीलाई डिहाइड्रेट गर्ने काम गर्छ जसका कारण खोकीको समस्या थप बढ्न सक्छ ।
Previous आज दिनभर नेपाल टेलिकमको कल निःशुल्क, सेवा सुचारु गर्न यसो गर्नुहोस्
Next यी चार राशिका मानिसहरुमा हुन्छ अद्भुद शक्ति, कतै तपाईमा त छैन ?